Miendrika jadona sy tsy fanajana ny fifampiresahana misy eo amin’ny Fanjakana roa tonta mikasika ireo Nosy Glorieuses, Juan de Nova, Europa sy Bassas da India, izany vinavina izany, hoy ity farany, no sady mandika ankitsirano ny Fehinkevitry ny Fihaonamben’ny Firenena mikambana Laharana faha-34/91 sy 35/123.
Nampahatsiahy ny minisitra Tehindrazanarivelo Djacoba A.S. Liva fa araka ity Fehinkevitra Laharana faha-34/91 nankatoavina ny 12 Desambra 1979 ity, ny Fihaonamben’ny Firenena Mikambana dia mangataka ny Governemanta frantsay hanomboka tsy misy hatak’andro ny fifampiresahana amin’ny Governemanta malagasy, mba hamerenana amin’i Madagasikara ireo Nosy ireo izay nasintaka taminy tamin’ny fomba tsy ara-dàlana, sy hanafoana ireo fepetra rehetra manohintohina ny fiandrianam-pirenena sy mampisaraka ny tanin’i Madagasikara, ary indrindra ny tsy handraisana intsony fepetra mitovy amin’izany ka hampisy fiantraikany amin’ny fikarohana vahaolana ara-drariny mikasika ity fifanolanana ity.
Ity vinavinan’ny Fanjakana frantsay ity, hoy hatrany ny fanambarana, dia mampiseho ny tsy fanajana an’i Madagasikara sady manohitra ny fanambarana niarahan’ny roa tonta nanasonia teto Antananarivo, ny 18 Novambra 2019, izay mampirisika ny roa tonta hanohy ny fifanakalozan-kevitra araka ny tokony ho izy.
Manamafy ny Fanjakana Malagasy fa manohitra amin’ny fomba hentitra indrindra izany vinavinan’ny Fanjakana frantsay izany. Toheriny ihany koa izay fihetsika hafa rehetra na mivantana na ankolaka mety hanohintohina ny fiandrianam-pirenen’i Madagasikara amin’ireo Nosy ireo. Ny fifampiraharahana eo amin’ny roa tonta dia tokony tanterahana ankitsipo ary hitohy ao anatin’ny fifanajana feno.
Tsy naneho hevitra i Christophe Bouchard, Masoivohon’i Frantsa teo ampivoahana ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny Anosy taorian’ity fampiantsoana ity.